IQOption » Kalandrie toekarena - hetsika lehibe
Ahoana ny fampiasana kalandrie toekarena amin'ny varotra.
Hetsika manan-danja indrindra amin'ny kalandrie
Fivorian'ny solontenan'ny Banky foibe
Valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety
Fanapahan-kevitra momba ny zanabola
Vokatra anatiny (PIB)
Tsenan'ny asa sy ny tahan'ny tsy an'asa
Ny tetiandro ara-toekarena dia fitehirizam-potoana amin'ny hetsika lehibe rehetra eo amin'ny tontolon'ny ara-bola - vaovao manampy antsika hahatakatra ny fizotran'ny tsena amin'ny fotoana rehetra. Lahateny nataon'ny lehiben'ny fanjakan'ny Great Britain sy Japon, dia mitatitra momba ny tsy fananan'asa any Etazonia sy Eropa, ny mari-pahaizana momba ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny harinkarena faobe ary ny vinavinan'ny solika – misy fiantraikany amin'ny fihetsiky ny mpandray anjara amin'ny tsena izany. Izany no antony ilain'ny kalandrie ara-toekarena voalohany ho an'ny mpivarotra rehetra. Jereo ny famaritana manokana ny kalandrie toy izany etsy ambany.
AZAFADY AZO ATAO: RAHA TSY MAHITA NY FANAMBARANA EKONOMIANA EO AMBONINAREO FA MBOLA MISY BLOCKER AD. TSY MAINTSY AZO ATAO.
Kalandrie ara-toekarena novolavolaina mba hahitana mora kokoa ny vaovao ara-toekarena sy ny tatitra manerantany. Ireo kalandrie ireo dia ahafahana manasokajy ny vaovao amin'ny firenena, ny maha-zava-dehibe azy, ny daty ary ny karazany (toy ny harin-karena faobe, CPI, tsenan'asa sy ny sisa). Noho izany dia azon'ireo mpivarotra atao ny maminavina ny tsy fetezana ary handrafitra ny paikadim-pitantanana risika mifanaraka amin'izany.
Ny singa vaovao lehibe indrindra (rehefa antenaina ny fihoaram-pefy avo lenta) dia asongadin'ny marika manokana telo ao amin'ny kalandrie ara-toekarena, fa ny kely indrindra dia ny tsena manana marika tokana. Zava-dehibe ny mitadidy fa ny tatitra ara-toekarena rehetra dia manana «sanda tsara» - raha toa ka mifanaraka amin'ny sanda tsara indrindra ny isa rehetra dia midika izany fa mivoatra ny toekarena amin'ny расе tsara sy ny risika kely indrindra, ary izany no mahatonga ny toekarena toy izany tena manintona ny mpampiasa vola erak'izao tontolo izao.
Ankoatry ny maha-zava-dehibe ny vaovao ara-toekarena manokana, ireo mpandray anjara amin'ny tsena dia mihevitra ihany koa ny fahasamihafana misy eo amin'ny vinavina sy ny valiny tena izy ary koa mandray ny ambaratonga ambany indrindra sy ny ambaratonga ambony indrindra hojerena.
Gazety vaovao ara-toekarena ary ny tatitra ara-toekarena avy amin'ireo firenena manana toekarena mandroso sy mivoatra dia hetsika lehibe iray misy fiatraikany amin'ny fivezivezin'ny tahan'ny tahan'ny. Misy а be dia be tatitra ara-toekarena navoaka isaky ny day, ary ny mpivarotra dia mampiasa ny fihetsiky ny tsena amin'ny vaovao isan-karazany toy ny а fambara hanokatra toerana vaovao.
Saingy eo amin'ireo mpivarotra dia somary manjavozavo ny fomba hanatonana ny varotra amin'ity fampahalalana ity:
Manoro hevitra ny mpivarotra sasany mba tsy hanadino ny fotoana ahazoana tombony amin'ny famoahana vaovao ara-toekarena;
Ny sasany mazàna miandry ny filaminan'ny tsena ary tsy manao fampiasam-bola
Manome fihenam-bidy noho ny fanambaràna vaovao tokana izay indraindray ao anatin'ny isa 80-150 ao anatin'ny minitra vitsy monja. Ny vaovao hafa ao amin'ny kalandrie ara-toekarena dia saika misy akony eo amin'ny tsena.
Ny fanendrena ny lehiben'ny banky foibe eto an-toerana sy ny minisitry ny famatsiam-bola amin'ny kabinetra dia tena zava-dehibe, satria ireo olona ireo dia tompon'andraikitra amin'ny politika ara-bola ao amin'ny firenena. Miankina amin'izy ireo ny fampandrosoana ara-toekarena - na manasongadina ny fitomboan'ny harinkarena faobe na ny fikendrena ny fiakaran'ny vidim-piainana. Ankoatr'izay, ireo olona ireo dia tompon'andraikitra amin'ny fanapaha-kevitra momba ny tahan'ny zanabola - izay lafiny toekarena lehibe
Matetika, ny fanapahan-kevitry ny tahan'ny zanabola dia alaina mandritra ny fivorian'ny solontenan'ny banky foibe, ary ny fiovan'ny taha dia ambara aorian'ny fivoriana.
Matetika aorian'ny fivoriana dia misy ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety ataon'ny mpitondra ny banky foibe izay miresaka momba ny toe-karena ankehitriny.
Rehefa afaka tapa-bolana dia navoaka ny tatitra momba ny minitra fivoriana, ao anatin'izany ny zavatra rehetra noresahina nandritra ny fivoriana. Manome ny mpivarotra hanana fahatakarana tsara kokoa ny fomba fijery sy ny fomba famahana ny olan'ny solontenan'ny banky foibe ankehitriny ny fanapahan-kevitra raisiny.
Ny tahan'ny zanabola eo anelanelan'ny 2% sy ny 2,5% dia heverina ho tsara indrindra. Ny fihenan'ny taha dia mitarika amin'ny fanentanana ny toekarena. Lasa mora vidy kokoa ny findramam-bola amin'ny banky aloha, avy eo ho an'ny orinasa, ary farany ho an'ny mpanjifa. Mitombo ny fangatahana entana sy serivisy ary koa fitomboan'ny harinkarena.
Inflation (CPI = Consumer Price Index) no tahan'ny fiakaran'ny vidin'ny entana sy serivisy amin'ny ankapobeny. Noho ny fiakaran'ny vidim-piainana, misy ny fidinan'ny vidin'ny vola ary, vokatr'izany, latsaka ny fahefana mividy. Mazava ho azy fa ny vidim-piainana ambany dia liana amin'ny vidim-piainana ambany mba tsy hihena ny volan'izy ireo. Saingy ny governemanta dia maniry ny olona handany vola betsaka araka izay tratra mba hamenoana ny kitapom-bolam-panjakana amin'ny fanangonana hetra.
Izany no mahatonga ny fiakaran'ny vidim-piainana eo anelanelan'ny 2% -2,5% hoheverina ho manara-penitra, satria mifanaraka amin'ny governemanta sy ny vahoaka.
Ny vokatra anatiny (PIB) dia ny sandam-bola amin'ny entana sy serivisy vita rehetra novinaina tao anatin'ny faritry ny firenena tamin'ny vanim-potoana voafaritra. Arakaraka ny maha ambony ny isa no mahatsara kokoa ny toekarena. Ny fitomboana io sanda io dia famantarana fa mivoatra haingana ny toekarena. Saingy, ny fiakarana avo dia avo dia mety hampidi-doza ihany koa, satria mety ho tafahoatra ny toekarena ary mety hihena tampoka ny harinkarena
Izany no mahatonga ny harinkarena faobe eo anelanelan'ny 3% -3,5% dia heverina ho tsara indrindra ho an'ireo firenena manana toekarena mandroso.
lt dia zava-dehibe ny mahatakatra fa misy ny fiovan'ny toetr'andro eo amin'ny tsena aorian'ny famoahana vaovao manokana, ary indraindray dia sarotra ny manazava ny lojika ny hetsika. Saingy ny fahatakarana ny valin'ireo tatitra ireo dia iray amin'ireo lafiny lehibe amin'ny fahombiazan'ny mpivarotra efa za-draharaha, satria io fahalalana io no ahafahana mampihena ny risika ara-barotra.
← Fandaharam-pifaneraserana IQOption, misoratra anarana, fizarana vola, komisiona CPA, fidirana Vata famintinana ara-teknika ara-potoana →